Ithathe abaningi ingoma kaSho Madjozi nowaseKenya
USHO Mdjozi noSusumila abakhiphe ingoma esithathe abantu abaningi. Isithombe: INSTAGRAM
UCHAZE abalandeli bakhe uSho Madjozi ekhipha ingoma entsha nomculi waseKenya owaziwayo. USho ubelokhu ememezela ezinkundleni zokuxhumana ukuthi umatasa upheka ingoma entsha noSusumila. Le ngoma ethi Njoo enezinsuku ezintathu iphumile kodwa abalandeli balo mculi bakhombisa okukhulu ukuyithakasela. Kule ngoma uSho ushaya ngalo ulimi lwakhe alincela ebeleni bese kuba khona nendawo eshaywa uSusumila ngolimi lwangakubo nezinhlamvu zesingisi.
Yize kusabalwa izinsuku ifakwe kuYouTube le ngoma, kodwa seyibukelwe abantu abangaphezulu kuka-75 000 nokukhombisayo ukuthi izoya kude. USho uphinde wakuveza nokuthi ukuthakasele ukusebenza nalo mculi kanjalo nokuhambela izindawo ezahlukene ngesikhathi beqopha ivideo. Abantu abaningi naku YouTube bayithakasele kodwa bakhona nabaveza ukuthi ukuhlangana kwesigqi sikaSho noSusumila into entsha kubona.
Yize kunjalo kodwa iningi labo liyijabulele lancoma nangendlela ehlanganiswe ngayo le ngoma. USusumila ekhasini lakhe lika-Instagram uveze ukuthi ushaya ngesigqi samapiano nekwaito yangakubo abantu bazozizwela bona. USho akaqali ukwenza ingoma ethola idumela zisuka njengoba phambilini wavumbuka nengoma ekhuluma ngesilomo somdlalo wezidlakela sewrestiling uJohn Cena. Le ngoma yagcina seyidume umhlaba wonke seyinomdanso wayo.